सडकको दुर्दशाले पर्यटकीय ककनीमा चहलपहल घट्यो « Artha Path
नुवाकोट त्यस्तो जिल्ला हो, जसले मुलुक नै हाँक्न सक्ने नेता जन्माएको छ । जसमा डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्जुननरसिंह केसी, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, प्रकाशशरण महत, हितबहादुर तामाङ, नारायण खतिवडा, बहादुरसिंह लामालगायत रहेका छन् । नुवाकोट जिल्लाले यति ठूला नेता जन्माए पनि अहिलेसम्म बालाजु–बाइपासदेखि ककनीसम्मको २२ किलोमिटर सडकको निर्माण गर्न नसक्नु नुवाकोट जिल्लाकै दुर्भाग्य बनेको छ ।